Wershada Awoodda ayaa Adeegsata Ellicott® Kala Sooca si Ay u Soo Saaraan Qalabka Isticmaalka-Faa'iido Leh
"Qalabka ugu qiimaha badan ee ugu waxtarka badan abid ayaa lagu keenay gurigan. "- Mark Shea, Kaaliyaha Kormeeraha Daaweynta Qashinka
Muuqaalo aan caadi aheyn oo loogu talagalay biyo mareennada a, ha Ellicott Brand Taxanaha 370 Dragon ”DRAGON® ” gogo madax dilaacday waxay qodeen afar walxood oo kala duwan oo ka yimid laba warshadood oo korantada degeysa: dambas duul, ash hoosta, lime, iyo lime isku qasan ashqaska duusha. Dhererku wuxuu dhaqaaqey wax ka badan 100,000 oo yaarder oo kubadaha ah saddex bilood gudahood.
Magaalada Springfield, Illinois waxay leedahay oo maamushaa Xarunta Biyaha ee Magaalada & Awoodda (CWLP) Dahlmann Generating Station. Dhuxusha gubanaysa waxay soo saartaa saddex waxyaalood oo qashin ah: dambaska duqsiga, dambaska hoose, iyo nuuradda warshadda sifaynta biyaha. Waagii hore, waxyaabahan qashinka ah waxaa si joogto ah loogu keydin jiray balliyada ku jira xaalad qalalan ama qoyan. Dhawaan, adeegsi faa'iido leh ayaa loo helay kuwan
waxyaabaha. Dambaska hoose waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro warbaahinta wax ku oloysa iyo xarkaha saqafka; Dambaska duqeynta waxaa loo isticmaalaa sidii qalab buuxin loogu talagalay dhismaha wadooyinka; lime waxaa loo isticmaalaa beero beereedka Illinois si looga takhaluso carrada aashitada loona horumariyo soosaarka dalagga.
Waxaa jira hal dhibaato oo weyn, si kastaba ha noqotee: dhammaantood alaabooyinkan waxaa lagu daadiyaa barkadaha dejinta oo biyo ah, sidaa darteedna waxay u muuqdaan inay degaan meelo badan oo balliga ka mid ah, taasoo ka dhigeysa mid aad u adag in la soo kabsado. Markii hore Magaaladu waxay soo qoday qalabkan iyadoo la adeegsanaayo dib-u-habeyn dhabarka ah oo ku teedsan geesaha balliyada, laakiin qalabkani wuxuu ku eg yahay oo keliya gaaristiisa sidaa darteedna inta ugu badan ee maaddadu - ilaa
90% - waxay ku hartay balliyada biyaha hoostooda.
CWLP, ka dib baaritaan ku saabsan tiknoolajiyada badan ee qodista, waxay doorteen inay miinada ka dhigto alaabta iyadoo la isticmaalayo nooca loo yaqaan 'Ellicott Brand "DRAGON®" cutterhead dredge. Waxay go aansadeen inay marka hore qoddaan balligooda dejinta ee ugu weyn (qiyaastii 3000 fuudh dherer x 1000 fuudh ballac ah) oo ay kujiraan dambaska hoose iyo dambaska duullimaadku. Magaaladu waxay kireysay Ellicott®, nooca loo yaqaan 'dredge' oo ay ku shaqeysay iyada
shaqaale u gaar ah oo ay ku tababarteen "goobta" injineerada adeegga goobta Ellicott® iyada oo aan kharash dheeraad ah looga qaadin Magaalada.
Iyada oo ay weheliso qulqulatada, CWLP waxay qarin kartaa maaddada biyaha hoosteeda ku jirta illaa iyo cagaha 2000 meel ka fog goobta kaydinta halkaas oo shayga laga saaray barkadda loogu talagalay xiridda iyo qallajinta. Sababtoo ah dhuumaha xNUMX-inch waxay sii deynayaan ilaa xNUMX% cunnooyinka adag ee ku yaal aagga ilaa xNUMX GPM, oo Magaaladu ma aysan ogayn haddii maaddadu dejin doonto aagga diyaargarowga ama dib ugu soo laaban doono balliga weyn. Go'aanka ah in halkaas laga bilaabo marka hore way adkeyd. Si kastaba ha noqotee, ka dib laba toddobaad oo qallafsanaanta, Magaalada ayaa go'aamisay in dambaska hoose iyo dambaska duulku ay si wanaagsan u deggan yihiin aagga diyaargarowga isla markaana ay si sahlan uga qodan karaan tuubooyinka dambe, oo hadda ka shaqeyn kara hal aag oo keliya. Tani waxay qayb weyn ka ahayd barnaamijka dib u warshadaynta maadama 12% ee walxaha ku yaal balliyada laga qodayo qulqulka oo loo qallajiyo si faa'iido leh.
Wax-ku-oolnimada Dredge ayaa Kaydiya Ka Badan $ 200,000
Sababtoo ah qayb ka mid ah dambaska duqsiga ayaa u hayaamay dhismaha weyn ee balliga daadadka ah, qoditaanka ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu nadiifiyo aaggan si loogu oggolaado degitaanka adag ee adag ee balliga oo markaa ka nadiifin dheecaan leh. Mr. Mark Shea, maareeyaha mashruuca ee qodista qashin qubka Magaalada, wax kale ma uusan haynin ammaanta boggaga Ellicott®. Kaliya ma ahan inaan qodeyno alaabada dib-u-warshadaynta, laakiin waxaan helaynaa biyo nadiif ah oo qulqulaya oo ka hooseeya kan caadiga ah ee lagu qodayo dib-u-dhiska iyo dozers-ka. Muddadan gaaban ee lagu guda-jirayo, Magaaladu waxay keydisay in ka badan $ 285,000 iyo farsamooyinka caadiga ah, oo ah 50% keyd ah. ”
Magaaladu waxay kharash garaysay $ 1.80 halkii kilo mitir cubic oo shey ah oo meesha laga saaray marka la barbar dhigo midka ugu hooseeya ee ka soo baxa qandaraaslaha ee $ 3.85 halkii yaardi.
Balliga labaad iyo kan yar, oo ka hela biyo qulqulaya balliga weyn ee ash / gunta hoose ee ash, sidoo kale waxaa ku jira lime laga sifeeyay geedi socodka nadiifinta biyaha ee SO2. Magaaladu ma ogeyn sida wanaagsan ee Ellicott® Brand 370 dredge ay ugu shaqeyn doonto muuqaalka, lime qaro weyn oo lagu xoojiyey balliga. Waxa kale oo jiray 2000 fiit oo dhuumaha lugta kujiray, sidaa darteed magaaladu waxay rakibtay mitir qulquli ah (si loo cabbiro gpm slurry) iyo cabirka cufnaanta nukliyeerka si loo cabiro boqolleyda adag ee qulqulka. Barta dheecaanka oo 2000 fuudh u ​​jirta, qulqulka wuxuu ahaa 4100 gpm, oo liinta isku dheelitirnaanta dhuumaha waxay ahayd 50% adag culeys ahaan. Inkasta oo 370 ay hoos ugu dhici karto qoto dheer 20-fuudh, qoto-dheer qoto-dheer ayaa lagu qabtay 15 fuudh. Magaalada ayaa sidoo kale ogaatay in nuuraddu ahayd
lagu qaso ashrey duul, iyo taxanaha 370 wuxuu ku tuuray maadadan 50% cunnooyinka adkaha culeyska.
Sababta oo ah awoodda qulqulka qulqulka injirta ee lagu guuriyo dareeraha adag, waxaa suurtogal ah in lime-ka lagu qaado qaab dareere ah isla markaana si toos ah loogu dhigo meelaha beeraha ku hareereysan. Tani hadda waa wax caam ku ah bartamaha-galbeed, howshana way sii kordheysaa.
Mark Shea ayaa faallo ka bixiyey, “Waxaan xaqiijinay in Ellicott® Series 370 dredge uu dhaqaajin karo seddex ka mid ah wax soo saarkeena si aad u qiimo jaban, waxaanan leenahay suuq loogu talagalay alaabooyinkaas. Ma jirin wax waqti dhimis ah inkasta oo aan ka shaqeynaynay bilaha qabow ee qabow. Waxay u badan tahay inay ahayd qalabkii ugu qiimaha badnaa ee abid la soo galiyo gurigan. ”
Dillaacidda ashqashii duudduubnayd, dambaska ashleyda, iyo liinta, mar haddii ay suurtagal tahay in la soo celiyo, oo aan ku wada qabanno hal gabal oo mashiinno ah ayaa guul weyn u ah Magaalada Magaalada 'Springfield, Illinois. Kaliya tan kaliya laguma sameynin 50% kaydinta qiimaha marka la barbar dhigo farsamooyinka caadiga ah, laakiin sidoo kale xaalado badan oo farsamooyinka caadiga ahi aysan wada shaqeyn doonin gebi ahaanba.
Ku Bilaab Mashruuca Qodista Biya-biyoodkaaga Ellicott